के तपाईंलाई स्वास गनाउने समस्या छ ? ख्याल गर्नुहोस्! मुखमा फोहोर कुहिएको हुनसक्छ
यही समस्या मध्येको एक हो श्वासप्रश्वास गनाउने समस्या । ठूला सभा समारोह तथा गेटटुगेदरमा जाँदा धेरै व्यक्ति टाढा एकान्तमा बस्ने गर्छन्। मुख र श्वास गनाउने समस्याका कारण समूहमा घुलमिल हुन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ ।
किराले दाँत खाएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पनि श्वास गन्हाउँछ । दाँत किराले खाएर ठूलो ढाँड बनिसकेका हुन्छन् । त्यो ढाँडमा नजानिँदो पाराले अड्किएका खानेकुरा लामो समयसम्म बसेर गन्ध निकाल्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ ।
खैनी, चुरोट आदिको लतका कारणले पनि मुख गन्हाउन सक्छ । लसुन, प्याजजस्ता खानेकुराले पनि श्वास गन्हाउने गर्दछ ।